Magacyada iyo beelaha ay u dhasheen xildhibaanada Aqalka hoose ee maanta lagu doortay Garoowe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyada iyo beelaha ay u dhasheen xildhibaanada Aqalka hoose ee maanta lagu doortay Garoowe
Waxaa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal maanta lagu soo gaba-gabeeyay codadka wejiga koowaad ee doorashada xubnaha Puntland u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Doorashadaan oo ahayd mid ay ku tartamayeen musharixiin badan ayaa maanta lagu doortay ilaa 10-ka xildhibaan ee ka mid noqon doonna 37 xildhibaan ee Puntland u matali doonta Aqalka hoose ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Tiradda wejiga koowaad ee codeynta doorashada maanta ayaa ahayd in la doorto ilaa 12-xildhibaan, balse waxaa ilaa iyo haatan la doortay 10 musharax, iyadoona codeynta labada musharax kale dib loogu dhigay maalinta berri oo Axad ah.
Ergadda u codeysay musharixiintaasi maanta ku tartameeysay Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay tiro ahaan gaarayaan in ka badan 600-ergo, oo kala matalaya 8 beelood oo ka mid ah beelaha dega deegaanada Puntland.
Waxaa doorashada maanta goob-joog ka ahaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland iyo heer federaal, iyo sidoo kale kor-joogayaal ka socda bulshadda rayidka ah.
Maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeya ee bilaaba doorashadda Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo qaar ka mid ah qabaa’ilka dega deegaanada Puntland ay ka cabanayaan qaabkii loo qeybiyay kuraasta.
1- Cali Yuusuf Cali Xoosh oo u dhashay beesha Ciise Maxamuud, wuxuu helay 49 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale C/rashiid Xasan Yuusuf oo helay 1 cod oo kaliya.
2- Saciid Daahir oo u dhashay beesha Ogaaslabe, wuxuu helay 44 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo Faduumo Ismaaciil Bootaan oo iyaduna heshay 7 cod.
3- Cumar Ismaaciil Waaberi oo u dhashay beesha Dashiishe, wuxuu helay 28 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cismaan oo isna helay 22 cod.
4- Cilmi Cumar Caynaanshe oo u dhashay beesha Madhibaan, wuxuu helay 27 cod, wuxuuna 1 cod oo kaliya kaga guuleystay musharaxa kale ee lagu magacaabo C/raxmaan Axmed Maxamuud ayaa helay 24 cod, halka Zakariye Khaliif aanu wax cod ah helin.
5- Axmed Ismaaciil Maxamed oo u dhashay beesha Warsengeli/Majeerteen, wuxuu helay 38 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa ee lagu magacaabo Iimaan Maxamed Cashuur oo isna helay 12 cod.
6- Maxamuud Xayir Ibraahim oo u dhashay beesha Cali Saleebaan, wuxuu helay 37 cod, wuxuuna ka guuleystay labada musharaxiin ee kala ah C/samad Maxamed Abwaan oo helay 12 cod iyo C/xafiid Cali Yuusuf oo isna helay 2 cod oo kaliya.
7- C/naasir Saciid Muuse, oo u dhashay beesha Sawaaqroon, wuxuu helay 26 cod, waxaana la tartameeysay ilaa 4 musharaxiin kale oo kala ahaa, Maxamed Saciid Saalax oo helay 17 cod, C/raxmaan Maxamuud Saalax Bankax oo helay 3 cod, Maxamuud Xaaji Saalax oo helay 2 cod, iyo C/laahi Maxamuud Ciise oo isna helay 1 cod oo kaliya.
8- Daahir Xaaji Geele oo u dhashay beesha Dubeys, wuxuu helay 46 cod, wuxuuna ka guuleystay musharaxa kale Maxamed Maxamuud Abees oo isna helay 3 cod.
9- C/rashiid Maxamuud Xasan oo u dhashay beesha Yibro, wuxuu helay 27 cod, wuxuuna ka guuleystay labada musharaxiin ee kala ah C/naasir Maxamed Cali oo helay 21 cod iyo Shamsudiin Goobdoon Yuusuf Makaawi oo isna helay 2 cod.
10- Cali Faarax Dhahar oo u dhashay beesha Dubeys, wuxuu helay 42 cod, wuxuuna ka guuleystay Maxamuud C/laahi Cali Yuusuf oo helay 6 cod, waxaa xumaaday 1 cod.